DHAGEYSI XASAASI AH: RW hore ee Soomaaliya oo lagu eedeeyey in uu abaabulayo Banaanbaxyada Muqdisho & M/weyne Farmaajo amray… – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES) – Salaad Cali Jeelle oo ah Lataliyaha Arrimaha Siyaasadda ee Madaxweynaha Dawladda, sheegtana in uu yahay gudoomiyaha mid kamid ah Xisbiyada ka diwaangashan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Banaanbaxyo laga abaabulayo caasumada ay ka dambeeyaan siyaasiin horey xilal uga soo qabtay Soomaaliya.
Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in siyaasiinta mucaaradka ah oo uu si gaar ah magaciisa u sheegay Ra’iisulwasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ay abaabulayaan banaanbaxyo looga soo horjeedo dawladda Faderaalka.
Mr, Jeelle oo lagu yaqaanay sannadihii u dambeeyey taageersanaan siyaasadda Xukuumadda hadda jirta, ayaa sheegay in abaabulkaas uu marayo meeshii u dambeysay, wuxuuna sheegay in ay ka dambeeyaan dawladda Imaaraatka Carabta.
Cumar Cabdirashiid ayuu sheegay in uu yahay Senator katirsan Aqalka Sare ee Soomaaliya oo aan waligiis soo xaadirin kulamada Aqalkaas, taas oo uu sheegay in ay sharci darro tahay, waana u muuqday mid si adag u difaacaya siyaasadda Madaxtooyada Faderaalka.
Saacadihii u dambeeyey abaabulka banaanbaxyo waa weyn ayaa socda, lama garanayo waxay noqon karaan iyo in ay dhici doonaan midna, waxaase muuqata in ay Xukuumadda Faderaalku aad uga walaacsan yihiin.
Kulan gaar ah oo xalay dhexmaray Madaxweyne Farmaajo, Raysalwasaare Kheyre & Kusimaha Taliyaha NISA Fahad Yaasiin ayaa lagu soo qaaday sida ugu dhaw ee wax looga qaban karro haddii ay dhacaan banaanbaxyadan, waxaana ay go`aamiyeen in ciidamo cusub la geeyo dhammaan Isgoysada muhiimka ah ee caasumada Soomaaliya.
Salaad cali jeele oo suqu kuxumaday oo xoga sandarerto ah lasiyo ayaa afka iska furtay,xukumada sii licaysa ee gabalkedu dhacay,Dacayada raqiiska ah ee salaad cali jeele maka badbadin karta kacoonka xoga badan oo muqdisho kaga furan?? sida laga warqabo salaad cali jeele oo suqu ku xun yahay oo xisbi kusheg sheganayey waxa dantu gayeysisay in uu noqdo talenon shilimo lagu shubto oo lo’adegsado dad masulin hore oo aan dhulkaba jogin in lagu catabo, taas oo aay ku dabolayan naf lacarinimda haysa.